Thola amaphutha wokuhlobisa esivame ukuwenza | Bezzia
USusana Garcia | | Umhlobiso, Amathrendi wokuhlobisa
Umhlaba wokuhlobisa uhlukahlukene kakhulu futhi kuhlala kushiwo ukuthi singahlobisa ngokukhululeka, yize kuliqiniso ukuthi kukhona futhi amaphutha avamile esiwenza cishe singahlosile. Ukufunda ukuhlobisa akuhlobene nje kuphela nezitayela noma nezinto ezithandwa yilowo nalowo, ngoba kunamaqhinga athile angasisiza sakhe izikhala ezihlukile nezikhethekile.
Thola amanye amafayela we- amaphutha ajwayelekile wokuhlobisa esivame ukuwenza kaninginingi ngenxa yomkhuba. Lapho sihlobisa kufanele sibe nomqondo ovulekile emibonweni emisha futhi nasekufundeni izindlela ezintsha zokuhlobisa. Thola konke obungazi ukuthi wenzani lapho nihlobisa.
1 Isakhiwo esibi
2 Ungazi ukuthi ungazinweba kanjani izikhala
3 Konke kuhlanganisiwe
4 Namathela kwisitayela esisodwa
5 Namathisela konke odongeni
6 Izibani ezivela phezulu
Enye yezinto zokuqala okufanele zibhekwe ukwabiwa kwezinto ngaphakathi kwendlu. Lokhu kungenye yezinto ezibaluleke kakhulu, ngoba i- ukwabiwa okuhle kusiza ukuthi indlu isebenze ngoba konke kugqama ngokuphelele. Kumele sibheke izikhala esinazo nefenisha esifuna ukuzigcwalisa ngayo. Umqondo omuhle ukwenza uhlelo ngokusatshalaliswa okuhlukile esifuna ukukwenza nokuhlola ngakho. Singathatha futhi izithombe futhi sicele abangani bethu ukuthi babone imizwa abanayo ngezakhiwo zendlu, ngoba bazobona izinto ngelinye iso. Futhi thola ugqozi ngemibono yomagazini, ngoba benza izakhiwo ezinhle nezithandwayo.
Ungazi ukuthi ungazinweba kanjani izikhala
I-Los Izikhala ezivulekile zihlala zimnandi ngokwengeziwe. Enye yezinkinga ezinkulu zezindlu ngokuhamba kwesikhathi kube yilezo zikhala ebezigcwele izinto futhi zibukeka zincane. Imibala ekhanyayo ingukuthinta okuyisihluthulelo, ngoba yandisa izikhala, kepha kufanele futhi usebenzise izibuko ukukhulisa ukukhanya. Lezi zibuko eziseduze kwamawindi noma phambi kwazo zenza ukukhanya kuphindaphinde.
Elinye iphutha okujwayelekile kakhulu ukuhlanganisa yonke into ezikhaleni. Kwesinye isikhathi sicabanga ukuthi kulula kakhulu ukuhlanganisa yonke into, kepha iqiniso ukuthi lokho kwenza izikhala zibe yisicefe futhi zingenabo ubuntu. Inikeza kuphela isithombe sokuthi asazi ukuthi singahlobisa kanjani noma asikhathazekile ngakho. Ngakho-ke kungcono ukhethe ama-shades amathathu noma amabili bese unamathela kuwo, okwenza eyodwa kuphela ibe eyinhloko. Ngaphezu kwalokho, njengamanje kuvamile nokuxuba amaphethini.
Namathela kwisitayela esisodwa
Kungenzeka ukunamathela kwisitayela esisodwa kuphela ngokukhetha okhiye bakho bese ubangeza bonke. Kepha kungcono ukukhetha eziningi zazo bese uzixuba ngendlela ecashile, noma ngabe enye yazo iyinhloko. Ngakho-ke funa ugqozi ngoba eziningi zalezi zitayela zingaxubeka, njengokuvuna nezimboni, i-rustic nesimanje Futhi nokunye okungapheli.
Namathisela konke odongeni
Kujwayelekile ukuthi abantu babeke ifenisha eduze kodonga ukonga isikhala, kepha uma amakamelo ebanzi kungakuhle ukushiya ezinye izinto zihlukile. A) Yebo sizokwakha umoya okhululeke kakhudlwana. Akudingeki ukuthi ngaso sonke isikhathi ifenisha ihleleke ngendlela efanayo, ngoba singakwazi ukuyishintsha ukuze sakhe izikhala ezintsha ngezikhathi ezithile. Kufanele uphule isikhunta ukuze ujabule ngomhlobiso.
Izibani ezivela phezulu
Elinye iphutha elenziwa ukusebenzisa amalambu avela phezulu kuphela. Ukudlala ngamalambu kusisiza ukuthi sakhe izikhala ezifudumele nalapho ezinye izindawo nefenisha zigqama kangcono. Sebenzisa izibani zodonga ngamasoni kanye namalambu aphansi.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Umhlobiso » Amaphutha wokuhlobisa esivame ukuwenza